Finoana sy fahafoizan-tena
“Finoana no nandavan'i Mosesy tsy hatao hoe zanaky ny zanakavavin'i Farao, rehefa lehibe izy, - nifidy mantsy hiara-mitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra toy izay hanana fifaliana vetivety amin'ny fahotana, nanao ny fanaratsiana an'i Kristy ho harena be lavitra noho ny zavatsoan'i Egypta, satria nijery ny famalian-tsoa izy. Finoana no nandaozany an'i Egypta, ka tsy natahorany ny fahatezeran'ny mpanjaka; fa naharitra toy ny mahita Izay tsy hita izy.” – Heb. 11:24-27.
Tsy azo atao ny mandimby ny seza fiandrianan’i Farao, araka ny lalàna, raha tsy avy amin’ny fokon’ny mpisorona. Koa noho ny maha-mpandova voatendry an’i Mosesy, dia tsy maintsy nampianarina ny fivavaham-pirenena izy. Nianarany tamin-kafanam-po fatratra izany; nefa na oviana na oviana dia tsy nety nitondra fanatitra ho an’andriamani-tsy izy izy. Norahonana tsy hahazo ny fanjakana izy ary nampitandremana fa raha mbola mifikitra amin’ny fanekena ny fivavahana Hebreo, dia havoakan’ny mpanjakavavy ny didy fanonganana azy. Nefa tsy azo nohozongozonina tamin’ny fanapahan-keviny hanome voninahitra Ilay Andriamanitra tokana Mpanao ny lanitra sy ny tany izy. Tamin’ny ady hevitra nifanaovany tamin’ny mpisorona sy ny vahoaka, dia nasehony fa hadalana ny fanajana ny sampy izay zavatra tsy manana aina. Tsy misy olona afaka nandresy lahatra ny foto-kevitra notanany, na nampiova ny fomba fijeriny, ka nekena tsy fidiny tsikelikely ny toetra matotra nasehony noho ny toerana ambony notanany sy ny zo nananany na teo amin’ny fanjakana na teo amin’ny firenena.
“Finoana no nandavan'i Mosesy tsy hatao hoe zanaky ny zanakavavin'i Farao, rehefa lehibe izy, nifidy mantsy hiara-mitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra toy izay hanana fifaliana vetivety amin'ny fahotana, nanao ny fanaratsiana an'i Kristy ho harena be lavitra noho ny zavatsoan'i Egypta, satria nijery ny famalian-tsoa izy.” Afaka nitana toerana ambony niaraka tamin’ireo mpitondra lehibe teto an-tany i Mosesy; nety ho tonga malaza teo amin’ny lapam-panjakana mamiratra indrindra izy ka hahatsara ny fitondram-panjakana. Nihoatra noho ny an’ny olo-malaza hatrizay ny fahambonian’ny fahaizany. Tsy nisy nitovy taminy tamin’ny fahaizany tantara sy tononkira sy filozofia ary ny maha-mpitari-tafika sy mpanao lalàna azy. Kanefa na nivelatra teo anatrehany toy izany aza ny voninahitr’izao tontolo izao, dia nolaviny tamin-kerim-po ny ho avy mamirapiratra ahazoan-karena sy fahalehibeazana teto an-tany, “nifidy mantsy hiara-mitondra fahoriana amin’ny olon’Andriamanitra toy izay hanana fifaliana vetivety amin’ny fahotana”, izy. Fantatr’i Mosesy ny famalian-tsoa nomanina ho an’ny mpanompon’Andriamanitra manetry tena sy mahatoky any am-parany. Aminy, dia voasaron’izany teny fikasana izany rehefa mety ho voninahitry ny tany. Voatolotra ho azy ny seza fiandrianana sy ny lapa soan’i Farao. Nahalala ny fahotana sy ny tsy fitiam-bavaka izay nanjaka teo amin’izany toerana feno fakam-panahy izany anefa izy. Tazany manangasanga any an-koatry ny lapa tsara tarehy sy ny satroboninahi-panjakana ny voninahitra tsy manam-paharoa izay hasatroka ny olo-masin’ny Avo indrindra any amin’ny fanjakana madio sy masina. - PM, tt. 2442-2451.